Cala Salada | Vaovao momba ny dia
Maria | | Tanànan'ny Espana, Ibiza
Voahodidin'ny natiora amin'ny tontolo zara raha tanàn-dehibe, i Cala Salada dia hita, iray amin'ireo lava-boribory tsara indrindra sy be mpitsidika indrindra ao Ibiza noho ny rano turquoise, ny fasika volamena ary ny faritr'i Mediteraneany. Tonga lafatra amin'ny Instagramming! Izy io koa dia manana toetra mampiavaka azy hafa izay manintona azy tena tsara: misy coves roa ao anatin'ny iray! Ahoana no ahatongavan'izany? Hilaza aminao izahay avy eo.
1 Tahaka ny ahoana ny Cala Salada?
3 Ahoana no handeha?
Tahaka ny ahoana ny Cala Salada?
Cala Salada sy ny mpifanila vodirindrina aminy Cala Saladeta, dia roa amin'ireo coves malaza indrindra ao Ibiza. Ny voalohany dia miavaka amin'ny tontolon'ny fianakaviany raha ny mpihaino ny faharoa kosa tanora kokoa, izay mety ho voatosiky ny fahasarotana lehibe amin'ny fidirana, ka raha be entana ianao na tsy dia mailaka dia tsara kokoa ny mijanona ao Cala Salada na dia amin'ny daty sasany aza dia mety hihamaro ny olona.
Ho an'ireo izay te-hitsidika ny coves roa dia afaka mandeha amin'ny lalana mihodina mamakivaky ny harambato feno harambato eny amoron-dranomasina izy ireo ary mifindra avy eo amin'ny elanelana mankany amin'ny iray hafa. Mahagaga fotsiny ny fomba fijery panoramic amin'ity lalan'ny ranomasina ity.
Voahodidin'ny havoakan'ny kesika i Cala Salada izay sarotra jerena, noho izany dia toerana itiavan'ny olona sy ny mpizahatany miala sasatra ary mankafy amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Ny lohataona sy ny fararano no vanim-potoana ahafahana manao ny andro feno masoandro sy ny rano mediteraneana, ho an'ny fanaovana «tanning», filomanosana na filomanosana. Mandritra io fotoana io dia hipoka kokoa ny moron-dranomasina noho ny amin'ny volana mangatsiaka, rehefa mitsangatsangana ny mpitsidika, mijery ny filentehan'ny masoandro na mankafy ny fomba fijery.
Ahoana no handeha?
Raha jerena ny toerana misy azy eo amin'ny sisin'ny Sant Antoni de Portmany, ny lalana tery izay tsy maintsy raisina ary ny tehezan-tendrombohitra farany, manolotra an'ity amoron-dranomasina ity amin'ny alàlan'ny mandeha an-tongotra na bisikileta. Ka, Safidy tsara ny fiara mankany Cala Salada ho an'ireo izay mifoha maraina satria kely dia kely ny fiara ary mameno haingana. Raha vantany vao vita io dia voarara ny fahazoana fiara misimisy kokoa hitahiry ny tontolo iainana na hanamora ny fidiran'ny serivisy vonjy maika raha ilaina izany.
Safidy iray hafa ny mandeha bus izay mandalo isaky ny 15 minitra eo amin'ny fijanonana eo akaikin'ny ivon-toeran'ny fanatanjahantena Can Coix. ary maharitra dimy minitra fotsiny vao tonga any Cala Salada. Ny vidiny dia 1,90 euro isaky ny mandeha ary miasa hatramin'ny tapaky ny Mey ka hatramin'ny 30 septambra.
Cala Salada dia azo idirana amin'ny ranomasina ihany koa, amin'ny alàlan'ny dia an-tsambo 45 minitra monja avy eo amin'ny seranan'i Sant Antoni. Ity safidy ity dia tena mahaliana ny mahafantatra ny manodidina an'i Ibiza sy ny morony amin'ny fomba fijery hafa. Ny be fanatanjahan-tena koa dia afaka sahy hahafantatra an'io cove io amin'ny alalàn'ny kayak ho any aminy.
Sary | Mallorcadaily
Dingana iray monja miala amin'ireo roa kambana roa ireo, dia tsy misy afa-tsy ny trano fisakafoanana Cala Salada no azo hanina. Teraka tamin'ny taona 70 izy io raha kioska teo am-pasika fotsiny. Taty aoriana dia nifindra tamin'ny toerana misy azy io amin'ny lafiny ankavanan'ny Cala Salada. Fianakaviana manana ny maha izy azy ireo, izy ireo dia manam-pahaizana manokana amin'ny lovan'i Mediterane ary lovia trondro toy ny bullit de peix, arroz a banda na lobster, sns. Ny fakana an'ireto lovia ireto eo amin'ny terraska izay mijery ny rano mangarahara mahafinaritra dia traikefa tokana amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva. Amin'ny vanim-potoana dia misokatra isan'andro izy ary asaina mamandrika mialoha.
Serivisy hafa hitantsika any Cala Salada ny orana, ny fandriana mihantona, elo ary ny lakana. Ao Cala Saladeta dia tsy misy serivisy toy izany fa misy vondron'olona iray any mba hanamora ny fiainana ny mpizahatany.: mpivarotra empanada, sandwich ary cocktail, akanjo Ibizan, sarony ary snsetera lava. Na izany aza, misy foana ny mety hitaterana ny vata fampangatsiahana anao feno gilasy raha te hitandrina izany mangatsiaka mandritra ny andro ianao.
Raha fintinina, ity sakan'ny morontsiraka Espaniola misy rano amaradama ity dia tsy maintsy ho an'izay rehetra tonga voalohany any Ibiza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Cala Salada